Mogadishu Journal » 2018 » March » 10
Liverpool ayaa ka saari karta Manchester United kaalinta labaad haddii ay ku guuleystaan galabta garoonka Old Trafford oo ay labada koox ku kulmayaan. Afartii kulan ee ugu dambeysay labada kooxood ayaa ku dhamaaday barbaro, waxaana tababare Jose Mourinho laga barbareeyay labo...
Somaliland oo hakisay Wadahadaladii ay la yeelan laheyd Soomaaliya
Mjournal :-Xukuumada Somaliland ayaa ku dhawaaqday in ay hakin ku samaysay wadda hadaladii dhex mari lahaa Somaliland iyo Soomaaliya. Wasiirka arimaha dibada somaliland Dr. Sacad Cali Shire oo warbaahinta kula hadlay xarunta golaha wakiilada ayaa sheegay inaanay jirin duruuftii...
Mjournal :-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed C/llahi Farmaajo ayaa maanta furay kalfadhiga 3-aad ee Baarlamaanka Federaalka Jamhuuriyadda Soomaaliya oo ka kooban Aqalka sare iyo Golaha Shacabka. “Waxaan ku faraxsanahay in maanta si rasmi ah aan u...
NAIROBI, Kenya – The United States has proposed an arms embargo against South Sudan in a bid to stop the ongoing conflict in the country, said U.S. Secretary of State Rex Tillerson on Friday. “The U.S. believes that the arms embargo should be enforced and that is our...
Kenya’s government cannot account for $400 million in public funds, according to a damning report from the auditor general highlighting the country’s failure to crack down on graft and misuse of state resources. The report for the 2015/2016 financial year describes a...
Mjournal :-ka dib markii Maanta uu ka furmay Magaalada Muqdisho Kalfdhiga 3-aad ee Golaha shacabka Soomaaliya, ayaa waxaa la dhaariyay Saddex ka mid ah Xildhibaannada Golaha shacabka oo baarlamaanka kusoo biiray. Gudoomiyaha Maxkamadda Sare ee dalka Ibraahim Iidle Suleymaan ayaa...
Mjournal :-Mid ka mid ah dalalka Carbeed oo xubin firfircoon ku leh Jaamacadda Carabta ayaa dhex dhexaadin doona dowladaha Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta oo markii u horeysay muddo rubuc qarni uu mad-madow soo kala dhex galay xiriirka labada dal u dhaxeeya. Wararka laga helayo...
Mareykanka oo sheegay inuu kenya ka garabsiinayo la dagaalanka Al-shabaab
Mjournal :-Xoghayaha arimaha dibada mareykan Rex Tillerson oo ku sugan dalka Kenya kuna guda jira booqasho uu ku marayo dhowr wadan oo Afrika ah ayaa waxaa uu ka hadlay dagaalka ay Kenya kula jirto dagalaamayaasha Al-shabaab. Tillerson ayaa mar uu saxaafada kula hadlay magaalada...
Wasiirka arrimaha dibada Soomaaliya oo ka hadlay khilaafka Imaaraadka Carabta
Mjournal :-Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaasiga Caalamiga ah ee Xukuumadda Federaalksa Soomaaliya Amb. Axmed Ciise Cawad ayaa ka hadlay heshiiskii Dekeda Berbera. Heshiiskan oo ahaa mid Saddex geesood ah ayaa 1-dii bishan March waxa uu Magaalada Dubai ee dalka Imaaraad...
kalfadhiga 3-aad ee Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta furmaya
Mjournal :-Waxaa Maanta lagu waddaa in Magaalada Muqdisho uu ka furmo kalfadhiga 3-aad Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo Fasax galay 16-kii December sanadkii tagay ee 2017, tan iyo Xiligaas waxa ay xildhibaanada ku maqnaayeen Deegaan doorashadooda. Amniga...
Ciidamada dowladda oo Al-shabaab deegaan kala wareegay Shabeellaha Dhexe
Mjournal :-Ciidamada dowladda Federalka Soomaaliya, ayaa saaka la wareegay gacan ku haynta degaanka Gamboole oo ka tirsan Gobolka Shabellaha dhexe, halkaasi oo ay isaga baxeen al Shabaab. Degaanka Gamboole ayaa qiyaastii 50-KM u jira Magaalada Jowhar, waxaana halkaasi ku yaali...